आफ्नै छोरी लिएर बाउ फ*रा*र, छोरिले आमालाई भनिन बाउसगँ डि*भो*र्स देऊ(भिडियो हेर्नुस) – Charchit Entertainment
मानव सभ्यतामा बाउछोरी, दाजुबहिनी, दिदिभाइ जस्ता नाता पबित्र मानिन्छ । रगतकै नाता भएको मात्र होइन भावनात्मक नातालाइ पबित्र रुपमा लिइन्छ । तर पनि कहिलेकाहीँ यदाकदा यस्ता घटनाहरु पनि सुनिन्छ कि त्यस्तो पवित्र नाता बिर्सिएर अनै*तिक सम्बन्धहरु पनि भएको । अहिले हामी एउटा यस्तै एउटा घटनाको बारेमा चर्चा गर्दैछौ जसमा पवित्र नाता नै बिर्सिएका छन एक बाउछोरीले ।
झापाको कमल नगरपालिका5का सुरेन्द्र शर्माले डोनु बिश्वकर्मासगँ एक्काईस वर्ष अघि अन्तर्जातीय बिबाह गरे । अहिले उनिहरुको दुई छोरी र एक छोरा छन । वैदेशिक रोजगारीमा कतार आउने जाने गरेका सुरेन्द्र अहिले भने डोनुसगँ सम्पर्कमा छैनन । कहिले काहीँ आफ्नो छोरासगँ फेसबुकमा कुरा गर्ने सुरेन्द्र आफु कतारमै भर्को जानकारी गराउथे । तर डोनुले सुरेन्द्र कतारमा होइन काठमाडौमै आफ्नी 18 वर्षीय छोरी शिजा शर्मालाइ लिएर काठमाडौमा बसेको जानकारी पाइन । उनले बाउछोरीको सम्बन्धको बारेमा पुर्ण रुपमा खुलाउन आफुले नचाहेको बताइन तर उनिहरुबिच अनै*तिक सम्बन्धमा बसेको तर्फ भने संकेत गरिन ।
सुरेन्द्रसगँ उनले प्रेम बिबाह गर्नु अघि जातीय कुराले आफुलाई पछि अप्ठ्यारो हुने भन्दै बिहे गर्न नमानेको तर सुरेन्द्रले आफ्नो परिवारका दिदिबहिनी बिहे गरेर गएको र घरमा आफू मिलाएर राख्ने भन्दै कर गरे पछि बिहे गरेको बताइन । तर बिहे गरेको एक्काईस वर्ष पछि उनलाइ उनका श्रीमानले त कामिकि छोरी भन्दै कुट*पिट गरि जिन्दगी चलाउन नस्क्ने भन्दै छोडेर हिडेको पनि उनले खुलाइन । साथै बिबाहदर्ता पनि उनका श्रीमानले च्यातेर फालिदिए । त्यति मात्र होइन उनले छोरिलाइ एकपटक गा*ली गर्दा उनका श्रीमानले मा*र्न भन्दै कपा*लमा समा*तेर घाँ*टिमा खु*कु*री पनि राखेको बताइन तर छोराले चिच्या*उदै हल्ला गरेपछि छोडेर हिडेको बताइन ।
केही समय अगाडि देखि छोरी बहिरै बस्ने गर्थिन तर त्यो बेला आफ्नो बाउसगँ कुनै सम्पर्क नभएको भन्ने अहिले भने सगै कसरी भयो ? भन्दै डोनुले प्रश्न गरेकी छिन । अहिले डोनुलाइ छोरिले बारम्बार बाउलाइ डि*भोर्स दे भन्दै आमालाइ ध*म्का*उने गरेको पनि उनले खुलाइन । त्यति मात्र होइन छोरी शिजाले उनकै मामालाई पनि तेरो बहिनिले किन मिडियामा बाउको बेइ*ज्जत गर्दै हिडेकी भन्दै ध*म्का*उने गरेको पनि खुलाइन । उनका श्रीमान पहिले पनि एकजना खड्का थरकी महिलालाई पेट बोकाएर पछि कुटपिट गरि खेदाएको आफुले पछि थाहा पाएको बताइन ।
अहिले आफू बाउको सेवा गर्दै बसेको र तैले बाउलाइ खुशी दिन नसकेको, बाउको इच्छा चाहामा पूरा गर्दिन नसकेको, नबुझेकोले गर्दा अहिले यो अवस्था आएको त्यसैले डि*भोर्स दे भन्दै छोरिले ध*म्का*उने गरेको पनि उनले बताइन । अन्य कुराहरु धेरै छन खुलाउन नमिल्ने तर यदि उनिहरु आएर त्यो कुरा बुझ्न चाहे आफू प्रमाण दिन सक्ने भन्दै उनले अनै**तिक सम्बन्ध रहेकोतर्फ संकेत गरेकी छिन ।
डोनुलाई उनका श्रीमान र छोरिले उनीसगँ भएको छोरा र चौध महिनाकी छोरी अरु कसैको भएको भन्दै आफुलाइ डि*भोर्स दिएर त्यसैसगँ सग जा भनेर बारम्बार भन्ने गरेकी बताइन । उनले भने आफू परे डि. एन.ए परिक्षण गर्न तयार भएको बताइन । उनले आक्रोशित हुँदै यदि यी बच्चा अरु कसैको हो भने आएर प्रमाणीत गर्न पनि चुनौ*ती दिएकि छिन । उनले आफू जसरी भए पनि खोज्ने र आफुलाइ लाएका अरो*प प्रमाणित गर्नु पर्ने साथै कानुनी ल*डाइ ल*ड्ने त्यसका लाई सबैले सहयोग गरिदिन अपिल गरिन । ( तल भिडियो हेर्नुस )